Ady amin’ny kolikoly : tsy manaiky ny hampihenana ny fahaleovantenany ny Pac | NewsMada
Tsy afaka ny hangina. Nitondra fanazava,na ny eo anivon’ny Pac, manoloana ny lalàna naroson’ny depiote momba azy ireo.
“Tsy vitan’ny hoe nanena ny fe-potoam-piasan’ny Pac ny lalàna naroson’ny solombavambahoaka. Ambonin’izany ary tena goavana indrindra tamin’ilay fanovana nentin-dry zareo: nanesorana be dia be ireo karazana heloka tokony hotsarain’ny Pac nefa manana endrika toekarena sy vola.”
Io ny fanazavan’ny mpandrindra ny fitsarana misahana ny kolikoly (Pac), Ratiarison Harimahefa, ny amin’ny fanitsian’ny eo anivon’ny Antenimierampirenena ny lalàna momba ny Pac. Raha ireo karazana heloka efa misy 20 no miala: inona intsony ny maha fitsarana iadiana amin’ny kolikoly ny Pac? Nefa politikan’ny fitondrana ny tsy fandeferana amin’ny heloka tamin’ny vola.
Fampihenana ny fahaleovantenan’ny Pac ny fampihenana ny fe-potoam-piasany. Raha tokony ho efa-taona izany, hahena ho telo taona. Izay fahaleovantena izay no antoka amin’ny fisian’ny fe-potoam-piasana. Koa raha hahena ny fe-potoam-piasany, mihena koa ny fahaleovantenany.
Mbola miady ny Pac…
“Eo anatrehan’izay, mbola miady izahay”, hoy izy. Satria mbola eo anivon’ny Antenimierampirenena ilay lalàna nolanina, mbola tokony handeha eo anivon’ny Antenimerandoholona. Miandry an’izay izany ny Pac amin’izao fotoana izao, ary mbola hiady amin’izay.
Etsy an-kilany, misy ady hafa koa ataon-dry zareo. Tsy mandeha irery ny Pac ary tsy izy no misahana ny ady amin’ny kolikoly fa misy rafitra hafa: ny Bianco, ny CSI, ny Samifin. Miezaka izy efa-tonta ireo hanana ny paikadiny hahazoana mametraka ny politikan’ny fitondram-panjakana hoe tsy fandeferana amin’ny kolikoly.